YAOVA PITA ịfụfụ ịkpụzi igwe na-emepụta na ndị na-eweta ya - China
Anyị extrusion igbu ịkpụzi igwe na n'ọtụtụ ebe etinyere kwa ụbọchị-eji ngwaahịa, egwuregwu mmiri kalama, pesticide karama, na nkà mmụta ọgwụ karama, ịchọ mma karama, nri mbukota akpa, ngwá ụlọ akụkụ, na akpaaka akụkụ, toy, Jerry nwere ike na ndị ọzọ obere ma ọ bụ ọkara-sized oghere plastic ngwaahịa. Backnọgide na-ndabere bụ elu anyị kacha mma ọrụ ngwá ọrụ. Na usoro ọ bụla nke oru ngo gị, anyị nọ ebe a iji nye ndụmọdụ ndụmọdụ teknụzụ. Gị afọ ojuju na ịzụta ahụmahụ bụ nnukwu nkwenye anyị. Anyị na-agba mbọ iji na-emezu gị mmepụta arụmọrụ na ike na ihe mgbaru ọsọ nke mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ.
PASTEUR PIPETTER DROPPER / ENEMA igwe
NTTRP BLR BL AHOW Nkedo igwe 1L-30L
Large akpaka PITA ịfụ igwe
Dị ka usoro ọkọlọtọ anyị, ọ na-eme nke ọma na afọ nke mmepe na mmelite emeriwo nkwupụta sara mbara n'aka ndị ahịa anyị. Ahịa zuru ụwa ọnụ eruola ọtụtụ narị nhazi 2. Ihe nlereanya a dabara karama karama n'ụdị na ụdị dị iche iche 3.Preform abanyela nke ọma ma nwee ọkụ ọgbụgba ọkụ kachasị mma 4. Igwe na-ebugharị na-ebugharị igwe: ogologo oge, enweghị mmetọ. na obere mkpọtụ 5.High akpaaka na ọgụgụ isi 6.High mgbali gas mgbake unit nwere ike e mere na-eji maka ala nsogbu ije. 7.HMI na PLC na-eme ka ọrụ dị mfe ma dịkwa mfe
Ofụri Esịt akpaka SBM-n'obosara olu nlereanya
1.Ihe atụ a dabara adaba ị bottleụ karama anụ ọhịa, dị ka zip-top nwere ike, obere ma ọ bụ nnukwu nnukwu ite, wdg. 2.Preform na-abanye nke ọma wee nweta ọkụ na-acha ọkụ ọkụ kachasị mma. 3.Machine na-ebugharị site na ikuku cylinder dị: na-adịgide adịgide, enweghị mmetọ na obere mkpọtụ. 4.High akpaaka na ọgụgụ isi. 5.High mgbali gas mgbake unit nwere ike e mere na-eji maka obere nsogbu ije. 6.HMI na PLC na-eme ka ọrụ dị mfe ma dịkwa mfe
Servo akpaka SBM-High ọsọ nlereanya
1.Ihe Nlereanya a na-echekwa ike, na-akpaghị aka ma dị mfe ịrụ ọrụ. 2.Imported ụdị eji na igwe, gụnyere pneumatic mmiri, biarin, electric akụkụ, wdg 3.Machine bụ servo-chụpụrụ, nke na-eme preform n'ọnọdu ezi ọsọ na ike. Ezubere akụkụ nke clamping ka ọ bụrụ ihe nkedo, nchekwa nchekwa, kwụsie ike ma rụọ ọrụ nke ọma, enweghị mkpọtụ. 5.High mgbali gas mgbake unit nwere ike e mere na-eji maka obere nsogbu ije. 6.HMI na PLC na-eme ka ọrụ dị mfe ma dịkwa mfe.
Ọkara akpaaka SBM-Aka nri
1.Easy ọrụ na-adaba adaba. Emehie pụrụ ngwa ngwa hụrụ na kọmputa na mfe maka mmezi ndị mmadụ iji kpochapụ. 2.Effectively-used ume na elu ọnụego nke okokụre, na ya àgwà na-hụrụ na a pụrụ ịdabere na kpo oku system- infrared oriọna na kpomkwem esichara ebu 3.Mechanical Ọdịdị dị mfe na obere ohere a chọrọ.
Obere karama akpaka PET ịfụ igwe
General akpaka PET ịfụ igwe